Global Voices teny Malagasy » Vohitra iray ao Alep,Siria, Lasa Fenitra Vaovao Ny Daroka Balafomanga · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Janoary 2017 2:24 GMT 1	 · Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Marcell Shehwaro, Marie André, avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
ity lahatsoratra (tamin'ny 26 Martsa 2014) ity dia ao anatin'ny andian-dahatsoratra manokana  nosoratan'ilay vehivavy bilaogera sady mpikatroka, Marcell Shehwaro, izay manoritsoritra ny fiainana ao Siria mandritry ny ady mitohy ifanaovan'ny tafika miandany amin'ny fanjakàna sy ireo izay mikendry ny hanongana azy.
Marcell Shehwaro, bilaogera sady mpikatroka, nandritry ny hetsipanoherana iray tao Siria. Sary an'i Marcell Shehwaro nahazoana alàlana aminy.
Hafa kokoa ity lahatsoratra ity raha izay nolazaina tamiko hatry ny izaho mbola zaza no noraisiko “Aza avela hiandry rahampitso izay azonao atao anio.” Omaly hariva ity lahatsoratra ity no tiako nosoratana, rehefa injay aho tonga saina fa mety ho lany ny vatoaratry ny solosaina. Efa roa andro izao, tsy manana herinaratra izahay ao an-trano ary dia nanapaka hevitra aho ny hamela ny fanoratana ny lahatsoratro ho androany maraina.
Nanana eritreritra hanoratra lahatsoratra iray momba ny fiainana isanandron'ny zazavavy iray aho, izay miavaka kely fotsiny. Azo lazaina ho mpikatroka izy, satria marika mahasarika izany ho an'ny sasany.
Iraka nampanaovin'ny Global Voices ahy ny hampahafantatra anareo ny antsipirihan'ny fiainana isanandro ao Siria. Momba io lohahevitra io indrindra no efa niomanako hosoratana, raha vitako ny nanoratra ny lahatsoratro omaly hariva, ary raha tsy nandevozin'ny teknolojia aho. Izany eo ihany, tiako kokoa raha afaka namita ny lahatsoratro natao sora-tànana ary notarafin'ny hazavan'ny jiron-tsolitany aho. Tahaka ny hoe tsy afaka manoratra intsony aho raha tsy mandre ny fikapokapoky ny rantsan-tànako eo ambony fitendry.
Fa ndeha hiverenantsika ilay lahatsoratra. Andalana ny handeha hatory aho no sady nieritreritra ihany ny hanoratra azy ity anio maraina raha vantany vao mahita herinaratra. Saingy nanana tanjona hafa ireo Tafi-Piarovana An'habkabaka Siriana. Tamin'ny 8 maraina aho no notarin'ny fipoahana iray tena faran'izay akaiky — balafomanga iray nalefan'ny Tafika an'habakabaka no nidofotra teo amin'ny 100 metatra miala ny tranonay, tao an-tanànan'i Mashad, ao Alep. Samy nanomboka nanisa. Roa…telo…fito. Lavitra kokoa ity farany no nitontona. Valo…Nanomboka nihovitrovitra ny fitaratra. Nanapaka hevitra ny hamoha ny varavarana sy ny varavarankely rehetra aho. Ny zavatra voalohany tonga tao an-tsaiko dia ny hoe aleo tratry ny sery toy izay haratran'ny vakim-pitaratra sy ny zava-mipoaka.
Nangoniko daholo ireo lamba fitafy hitako, ary nitsofoka tao ambaniny aho dia resin-tory. Nampianatra ahy ny ady hoe azoko atao hatrany hatrany ny matory, na inona na inona zavadoza mitranga any ivelany any.
Zoma tamin'izay ary tsy maintsy nandray anjara tamin'ny hetsipanoherana iray tao am-bohitr'i Bustan Al Qaser aho. Niakanjo aho ary dia nivoaka teny an'arabe, fihetsika azo heverina ho sahisahy ihany, indrindra fa nisy ireo daroka baomba. Tampotampoka teo, lasa toy ny tsy fantatro ilay vohitra nahazatra ahy. Balafomanga 16 no nidoboka tao, hoy ireo namako izay nanisa azy ireny. Ary balafomanga 16 dia ampy nanova ny endrika mahazatra tamin'ny vohitra iray toy ilay nonenako. Feno poti-bato sy vakim-pitratra teny rehetra teny, ary tsy dia sahaza loatra tamin'ny zavanisy ireo baoty Ugg teny amiko.
Teny an'arabe, samy niandrandra lanitra ny olona rehetra. Ny olona rehetra, hoy aho. Sivily dimy na enina monja izahay no nivoaka ny tranonay. Lahiantitra iray no nitomany raha mpivarotra mandehandeha iray kosa niantsoantso ireo mpividy, nilaza fahafatesana: “mihamanakaiky… tonga… hilatsaka io… latsaka…” Mbola nampalahelo kokoa noho ny fahitàna ireo fatin-korontana ny mandre io tsianjery maimbo io.
Nihananakaiky ny tifitr'ireo fiaramanidina mpiady. Nihazakazaka nandositra ny feon'ny fipoahana ny olona. Nampihomehy ahy sy ilay namako ny nieritreritra ny hoe mihazakazaka mba handositra fiaramanidina mpiady. Noherevin'ireny olona ireny ve fa mbola niaina tamin'ny vaninandron'ny hetsi-panoherana am-pilaminana ry zareo ka ho afaka handositra bala amin'ny alàlan'ny hazakazaka? Sa hoe fihetsika mandeha ho azy ho fanavotan'aina fotsiny, tonga tampotampoka eo sy tsy voahevitra? Iza no ho afaka handositra fiaramanidina mpiady? Nalatsak'ilay fiaramanidina mpiady ny entany ka dia nihevitra izaho sy ilay namako hoe hadalàna ny mbola hanohizana ny làlana mankany amin'ilay hetsi-panoherana. Nitsofoka tamin'ny tranobe iray teo akaiky teo izahay ary nahita sivily marobe nangovitra. Notsiriritiko ny fahafahan'izy ireo manana tahotra. Midika izany fa, na mbola misy dikany ny ain'izy ireo, na, mifanohitra aminay, tsy zatra miatrika mivantana ny fahafatesana izy ireo.
Niantsoantso ireo olona any amin'ny rihana ambony mba hidina ireo fanamafisampeo. Re ireo anjomaran'ny fiara mpamonjy voina nivezivezy. Ary tampoka avy eo, ren'ny rehetra ny tifitra bala. Nanontany ahy ilay namako : “Afaka mahatakatra ilay fiaramanidina ve ireny bala ireny?” Dia izy ihany no namaly ny fanontaniany: “Tsia ry tsy foiko, balan'ny famoretana izany.” Nitsiriritra ilay mpikatroka nahatsapa ho voaporitra aho.
Avy eo dia niverina ho toy ny isanandro ny zavatra rehetra. Afaka nanohy ny dianay izahay.
Afaka ora vitsivitsy, hiverina ho toy ny isanandro ny fiainana ary ho feno mpivarotra mandehandeha sy mpandalo ny arabe. Androany, ireo tavela any anaty fatin-korontana sy ny fianakaviany no hany sisa hitomany, ary ireo izay rava trano. Hitoetra hisoratra, na tsia, any anaty fahatsiarovanay any ny sary sasany — ny an'io reny iray very fanantenana mahita ny tranony may sy ny fandriany tavela ao anatiny io, na itsy ankizivavy itsy mitantara ny nahatototra an-dreniny ao an-dakozian-dry zareo.
Ho anay, andro toy ny andro rehetra miaraka amin'ny zava-mipoaka ihany io. Manitsy ahy ilay namako : tamin'ity indray mitoraka ity tsy zava-mipoaka fotsiny fa balafomanga. Miala tsiny aho ny amin'io hadisoana io, andro toy ny andro rehetra miaraka amin'ny balafomanga.
Marcell Shehwaro dia manoratra bilaogy ao amin'ny marcellita.com  ary mibitsika amin'ny @Marcellita , samy amin'ny teny arabo izy roa ireo. Ato ireo lahatsoratra roa voalohany norotany ho an'ity andiany ity: eto  sy eto. 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/25/94884/
 andian-dahatsoratra manokana: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/2014-special-coverage/dispatches-from-syriamarcell-shehwaro-on-life-in-aleppo/